Toy izao no nahavitan'i Apple nanafoana ireo fonosana plastika an'ny iPhone 13 | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | 17/09/2021 18:11 | iPhone 13, About us
Hatramin'ny taona 2018, Apple dia orinasa tsy miandany amin'ny karbaona amin'ny sehatra fiasa manerantany. Na izany aza, ny tanjona dia na ny famokarana ny vokariny aza dia tsy homba ny karbaona alohan'ny 2030. Izany no antony anaovana asa lehibe ihany koa amin'ny fiezahana hahazoana antoka fa ny vokatra dia misy akony kely indrindra amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fanavaozana sy fanodinana ny akora. Ao amin'ny keynote farany nambaran'izy ireo izany ny iPhone 13 sy iPhone 13 Pro dia tsy nanana fonosana plastika izay hamonjy plastika 600 taonina. Na izany aza dia efa voavaha ireo fisalasalana momba ny inona ireo fonosana vaovao sy ny fomba ahazoantsika antoka fa tsy nosokafana. Ity no fonosana vaovao an'ny iPhone 13.
Ity sticker ity dia ahafahanao manala ireo fonosana plastika an'ny iPhone 13
Ny fivarotana, ny birao ary ny angon-drakitra ary ivon-toeranay dia efa tsy miandany amin'ny karbaona. Ary amin'ny 2030 dia toy izany koa ny vokatray sy ny dian-tongotrao karbaona rehefa mampiasa azy ireo. Nesorinay ny fonosana plastika tamin'ny tranga iPhone 13 sy iPhone 13 Pro tamin'ity taona ity, nitahiry plastika 600 taonina. Fanampin'izany, ny zavamaniry fivoriambe farany ataonay dia tsy mandefa na inona na inona any amin'ny fanariam-pako.
Ny lakilen'ny fanambaràn'i Tim Cook sy ny ekipany tamin'ny fanalahidy tamin'ny 14 septambra dia tao amin'ny vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana ihany koa. Tsy maintsy jerentsika ny tanjon'ny Apple amin'ny taona 2030 dia tsy miandany na madiodidin'ny karbaona ny asa eran-tany sy ny famoronana vokatra. Mba hanaovana izany, vola be no tsy maintsy apetraka amin'ny fanamorana ny fanodinana vokatra sy ny fampiasana fitaovana azo havaozina amin'ny fitaovana vaovao.
Amin'ny tranga iPhone 13, ny fanesorana ireo fonosana plastika manarona ilay boaty. Ity fonosana ity dia nisy tanjona roa sosona. Voaro aloha ilay boaty. Ary faharoa, hahazoana antoka fa tsy nosokafana ny vokatra alohan'ny ahatongavan'ny tanan'ny mpampiasa. Ary ahoana no ahaizanao manamboatra fonosana izay hitazomana ity teboka farany ity nefa tsy mampiasa plastika be loatra?
boaty iPhone 13 pic.twitter.com/NJfP37hFFP
- DuanRui (@ duanrui1205) Septambra 17, 2021
Ny vahaolana dia hita amin'ny sary iray izay nipoitra tao amin'ny Twitter izay ahitanao ny fonosana amin'ny iPhone 13. Mba hahazoana antoka fa tsy nosokafana ny vokatra adhesive ambony-ka-ambany dia namboarina teo ambanin'ny boaty, mandalo ny fetra farany fanokafana indroa. Amin'izany fomba izany dia mikatona amin'ny dity hatrany ilay boaty azo esorina amin'ny alàlan'ny tsipika tsotra amin'ny alàlan'ny fisamborana ilay kiheba voamarika amin'ny zana-tsipìka fotsy amin'ny background miloko maitso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Toy izao no nahavitan'i Apple nanafoana ireo fonosana plastika an'ny iPhone 13